Atụmatụ enyemaka maka oké ọkọchị na Bolivia | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe na-abawanye oke na oke ike nke ụkọ mmiri gburugburu ụwa. Na Bolivia, akuku mmiri dị ụkọ ma ọ bụ ya mere ha ji amalite ịmalite ọrụ enyemaka maka nchekwa mmiri na mmiri nke nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ụkọ mmiri ozuzo.
Oké ọkọchị na-ewere ọnọdụ na Bolivia ọ bụ nke kachasị njọ n'ime afọ 25 gara aga. Kedu oru ndi di iji belata nsogbu nke unwu mmiri?
Enyemaka Na Omume
Otu oru ngo nke NGO Ayuda en Acción (AA) na-agba mbọ iji belata nsogbu nke ụkọ mmiri ozuzo na Bolivia ma nata IV Nrite International maka Nkwado na Development, na mbipụta afọ a nke onyinye José Entrecanales Ibarra.
Onye isi nke Mmekọrịta nke AA, Marta Marañón, bụ onye chịkọtara ihe nrite na omume nke Eze Felipe nke Isii chịburu. Ihe kpatara onyinye a bụ nnukwu ọrụ emere na ọrụ a n'ime 2016 niile na mpaghara Andean Azurduy. Nzukọ a Adada en Acción na-enye aka iji wulite mmiri iji nyere aka idowe na ịchekwa mmiri megide unwu ahụ. Ọzọkwa, Ha jisiri ike nyere mmiri ọdọ mmiri iri abụọ na isii na ọdọ mmiri simenti iri atọ nke na-enye ndị bi na mpaghara 15 mmiri ugbu a.
Ọtụtụ ọrụ emerela na mpaghara a daa ma emechaa n'ihi na enweghị ike ịkwagide ha. Agbanyeghị, ọrụ a ga-aga n'ihu ebe ọ bụ na ndị Bolivia bụ ndị sonyere na mmepe nke nrụrụ aka site na mbido. Nke a na-egosi na ha ga-abụ ndị ga-arụsi ọrụ ike iji hụ na akụrụngwa ma hụ na ọdịmma ha dị.
Ọ bụ mgbanwe ihu igwe na - akpata oke ụkọ mmiri na nchekwa mmiri siri ike n’ọtụtụ mba ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Atụmatụ enyemaka maka ụkọ mmiri ozuzo na Bolivia
A na-ewepụta Ọrụ Ihu Igwe 63 iji belata ikuku ọkụ
Febụwarị 2017: dị ọkụ ma dị jụụ karịa nkịtị